Waa maxay faa'iidooyinka qaabka qurxinta Japan? -Warshad Alice
Jabbaan waa gobol ilaa xad madax banaan iyo qabiil xoogaa madax banaan. Waxay kaga duwan yihiin wadamada iyo gobolada kale dhinacyo badan, sida elektaroonigga, baabuurta, iyo qurxinta. Marka ay timaado qurxinta, waa inaan xusaa qurxinta Japan, taas oo ah qaab aan caadi ahayn.
Faa'iidooyinka qaabka qurxinta Japan:
Qurxinta 1.Japanese waxay door bidaa wallpapers xarrago leh oo leh qaabab casri ah iyo ubaxyo. Sababtoo ah alaabta guriga Japan waxay leedahay isku-dhafka naqshadeynta, kuma habboona in la isku dhejiyo derbiyada qaabka Yurub ee aadka u adag. Waxay la socotaa alaabta cad ee jilicsan.
2. In qaabka booska, qaabka Japanese wuxuu ka tarjumayaa dareenka Japan, iyo qurxinta booska inta badan waxay qabataa khadadka toosan ee fudud oo adag, taas oo ka tarjumaysa shuruudaha nolosha ee dadka casriga ah ee raadinta nolol fudud, oo u adeega qaabka naqshadeynta iyo naqshadeynta fudud. Qalabka guriga ee Jabbaan. Fiiro gaar ah u yeelo lakabka booska, oo isticmaal shaashado ama qaybo alwaax ah sida cabbirka qaybinta iyadoo loo eegayo tirada dadka deggan iyo heerka gaarka ah ee guriga.
3. Qurxinta Japan waxay jeceshahay inay isticmaasho dhagax iyo qurxin badan oo alwaax ah, naqshadeynta qolka jiifka ayaa ah mid diiran. Guud ahaan, sagxaddu waxay qabataa sagxadda guf la'aanta nalalka saqafka. Waxaa lagu qurxiyey noocyo diirran oo jilicsan oo dhar ah. Dabaqadu sidoo kale waxay door bidaan sagxadaha sagxadaha qadiimiga ah. Farsamada gacanta ayaa sidoo kale la raacaa, waxaanan jeclahay qaabka qolka fadhiga oo leh dareen taariikheed.
Isla mar ahaantaana, waa mid aad u lebbisan qurxinta jilicsan iyo midabka. Jikada guud ahaan way furan tahay, waxayna u baahan tahay inay haysato meel ballaadhan oo ay ku degto talaajad laba-albadood ah iyo meelo shaqo oo ku filan.
Halkan ku caddeeyo: Waxa kor ku xusan waxa ay ka yimaaddaan interneedka, waxa ku jirana waxa loogu talagalay tixraacaada oo keliya. Haddii aad ku xad gudubto xuquuqdaada, fadlan nala soo xidhiidh oo waanu tirtiri doonaa isla markaaba.
Alice Factory waa soo-saare xirfad leh oo samaysa taargooyinka alaabta guriga. Waxaan soo saari karnaa zinc alloy, aluminium, copper, brass, pvc, iwm. Calaamadaha aan samayno waxay inta badan ku habboon yihiin qalabka guriga, alaabta guriga, iwm.
KA HOR Sidee loo doortaa alaabta guriga? -Warshad Alice
Sidee la isku waafajiyaa qurxinta qaabka Japan? -Warshad Alice XIGTA